Nzira yekukanyisa sei immune system yako? - Afrikhepri Foundation
Chitatu, Gunyana 22, 2021
Kuverenga: 22 mins
Ita kuti muviri wako uwedzere
Lanodzivirira immune system anotamba mbiri dzinokosha mumuviri.
Kutanga, inoita kune miviri yekune dzimwe nyika nekugadzira ma antibodies uye inomutsa maseru akasarudzika ayo anoparadza zvinhu izvi kana kushandura zvigadzirwa zvavo zvine chepfu. Aya ndiwo marongero aanotidzivirira kubva kuvapambi vekunze ava, anoti hutachiona, hutachiona, hutachiona, nezvimwe zvakadaro. Ipapo anomira akachengetedza maseru emuviri kuti ave nechokwadi chekuti haana kujairika kana kushomeka.
Masoja emuviri wako
Munzira dzakawanda, maitiro ezvirwere zvemuviri ndiwo masimba anonyanya kushamisa muviri, nyore nyore kukurudzira neuropi, mukuoma kunzwisisa, kunyengera, uye "kuzviziva." Heano mimwe mimwe mienzaniso yezvinhu izvo zvirwere zvemuviri zvinoshandiswa:
• Zvirwere zvemuviri wako zvinokwanisa kuziva sero yese mumuviri uye unoziva mumwe nomumwe wavo seshamwari.
• Zvichidzoka, zvinokwanisa kuparadzanisa nekuziva vatorwa vekune dzimwe nyika, ingava mabhakitiriya, mavairasi, fungi kana zvipembenene.
• Pane imwe nguva muvengi anenge aonekwa, masimba ako epanyama anokurumidzira kuumba zvombo zvinodzivirira tsika zvinowanzoita kuti muvengi ave asina simba.
• Zvadaro zvinova nani. Mushure mekugadzira chirongwa chaiwo chinodiwa, muviri wako wekuzvidzivirira unobva watanga kuvaka firiti inobereka zvombo izvi muvanhu vakawanda zvakakwana kupwanya muvengi.
Zvikamu zveMusununguko Wenyika
Masero ose eropa, angave akachena kana masero masero eropa, anoumbwa kubva kumapfupa emapfupa. Aya masero anotanga kusinganzwisisiki kutora maitiro ehumwe uye kuva miviri yeropa tsvuku (oxygen carrier) kana masero masero eropa (masero ezvirwere zvemuviri). Heinozvino kusiyana kukuru mukati memasero machena eropa (anonziwo leukocytes), ayo akaparadzaniswa kuva mana mana masero evanhu:
Pose apo T-ma-cell kana B-masero anoshandisa nekuda kwevavengi, mamwe emamwe masero anova masero memangariro. Nenzira, vanowedzera "chiyeuchidzo" cheAntigen chaiyo inosanganiswa nemuvengi kuitira kuti pamusangano unotevera weanorgen imwe chete, masimba ezvirwere zvezvirwere anokwanisa kupindura pasina kunonoka.
Pane zvinhu zvakasiyana-siyana zvinokanganisa hutachiona hwemuviri hunogona kuwanikwa. Genetics inobatsira. Vamwe vanhu vanongoberekwa vane simba rakasimba rekudzivirirwa mumuviri kune vamwe. Zvokudya, mararamiro uye nzvimbo yakasikwa zvinokwanisawo kuvandudza kana kukuvadza zvirwere zvemuviri. Mukuwedzera, simba rekuzvidzivirira kwezvirwere zvemuviri pamwe nekureba kwenguva yezvirwere zvekuzvidzivirira kwezvirwere zvinoshandiswa zvakanyanya nemhando ye antigen inobatanidzwa, uye chiyero chakapinda mumuviri.
Patinozvarwa, immune system edu haana kusimba; hazvina basa kuti takazvidzivirira sei kubva kuna amai vedu. Pakarepo pakarepo, zvakadaro, uchifungidzira kuti iwe uri kuyamwisa, iyi dziviriro inotanga kumira mukati. "Mukaka" wekutanga watinogamuchira kubva kuna amai vedu, zvirizvo, kwete mukaka. Icho chinhu chinonzi colostrum, chinangwa chikuru chekusimbisa hutachiona. Colostrum yakazara nemasikirwo emasikirwo emasikirwo akaita lactoferin, alkyglicerols, uye mutation factor. Uyezve, kuyamwisa kunobatsira kumisikidza tsika dzeprobiotic mumatumbu, izvo zvinobatsirawo kuvaka ma immune system.
Mune huchenjeri hukuru hwekurapa kwemazuva ano, takagadzira zvirwere "kuvaka chiyeuchidzo" nekuda kwezvirwere zvedu zvemuviri - chiyeuchidzo chezvirwere zvikuru zvatisati tamboita semasopi, mawere, polio, diphtheria, chibhokisi, nezvimwewo. Mishonga ine utachiona husina simba hwehutachiona (kana kuti mapuroteni ema microorganisms) anokwanisa kubudisa mhinduro mumuviri pasina kukanganisa kuiswa kwakakwana kwechirwere chega. Kunyange zvazvo zvirwere zvakakosha basa mukubatsira kuderedza nhamba yevakafa pakati pevana, zvikomborero hazvisi pasina mari.
• Chirwere cheporiyo chakapiwa vana muZ50 nemakore 60 chakanga chisina kufanirwa sezvakambofungidzirwa. Ichokwadi, gare gare, apo michina yekuenzanisa iri nani yakashandiswa, yakawanikwa kuti pane 140 inorarama mavairusi mumavashandisirwo epakutanga epirini yeporiyo. Uye chii chakaitika? Zvakanaka, chimwe chinhu chine chokwadi, chimwe cheava mavairasi, SV40, inonyanya kufungidzirwa mukenza hwepfungwa.
• Jonas Salk akapupura pamberi peSenate subcommittee kuti kubvira 1961, kunze kwemamwe mashoma anokosha kubva kune dzimwe nyika, zviitiko zvose zveporiyo zvakakonzerwa neOrmal Polio Vaccine.
• MuC1986, hurumende yehurumende inogadzira National Vaccine Compensation-Compensation Program yekubhadhara avo vanobatwa nechirwere ichi. Kusvika iye zvino, anenge $ 1 mabhiriyoni akanganwirwa.
• Kuwedzera kune chikamu ichi chinoshanda "mushonga", chirwere ichi chinosanganisira zvinhu zvakadai se ethylene glycol (antifreeze), formaldehyde (inonzi known carcinogen), uye aluminium.
Tarisa, handisi kuti majekiseni anofanira kubviswa, chete kuti isu tinofanira kusarudza zvishoma pane zviri kuitwa izvozvi. Pakupedzisira, zvinokwanisika kuti matekinoroji matsva emajini ekugadzira, nekukwanisa kusarudzika zvachose antigen inogumbura, inogona kupa nzira yakachengeteka yejekiseni. Asi kusvikira izvozvo zvaitika. Izvo zvinetso zvinogona kuitika neIne Immune System
Zvinetso zvinogona kuitika ndezvi:
Mune maitiro ezvirwere zvezvirwere zvezvirwere zvinokonzerwa nevavengi vakawanda.
Zvirwere zvekudzivirira muviri zvinowedzera uye zvinowanzova nyore kukurwisa.
Mune maitiro ezvirwere zvemuviri anowedzera kuderera uye anoshaya kukwanisa kuziva muvengi kana kuti masero anotenderera.
Mune maitiro ezvirwere zvemuviri anova asina kumira uye anotanga kukanganisa mukuziva masero ane utano mumuviri sevavengi uye anotanga kuvarwisa.
Zvirwere zvemuviri zvinokanganiswa kana kusakwana pakuberekwa.
Pakati pezvinetso izvi zvose, mazana mana okutanga, mumatambudziko akawanda, anoruramiswa. Asi kana muviri wakaberekwa usingakwanisi kubereka chigadzirwa chikuru, zvingasarudzwa zviri pachena, asi kwete kwete pasina tariro.
Sezvo chinangwa chemuviri wechirwere chemuviri chirikudzivirira kurwisana nekurwisana nekugadzirisa icho pachako, zviri nani kuwana, hutano iwe uri. Kuti tikwanise kuita izvi, tinoda kutarisa zvinhu zviviri zvinokosha zvekudzivirirwa kwezvirwere zvatakatoona:
Tinofanira kuvandudza zvirwere zvekudzivirira muviri semunhu wese-kubvumira muviri kuti uzvidzivirire.
Tinofanira kuronga zvakananga (kuura / kuparadza) mabhakitiriya, mavairasi, microorganisms nezvimwe zvirwere zvinorwisa zvirwere, kubatsira masimba epanyama, sezvinofanira.
Masayendisiti akaziva kwemakore kuti zvinokwanisika kuvandudza kushanda kwemuviri wemuviri. Pano muUnited States, nzira iri kushandisa kushandisa mari inodhura zita remishonga. Zvinodiwa panguva ino zvinosanganisira cytokine inotarisa zvakadai se interleukin uye interferon. Mamwe ose enyika, kune rumwe rutivi, akatora kuswedera pedyo nemasikirwo kuburikidza nekutsvaga kushandisa zvinhu zvakasikwa ku:
• Simbisa uye kusimbisa masimba emuviri
• Kurwisa zvirwere
• Simbisa simba re macrophage
• Wedzera kutengesa kwemasero eT uye kudzivirirwa kwemasero anobatsira T
• Ita basa re interferon uye interleukin 1
• Batsira maitiro epakati pemasero emasero
Echinacea inoshamisa zvishuwo zvinomera. Kune rumwe rutivi, rine echinacoside (antibiotic yemasikirwo, yakaenzana ne penicillin yemigumisiro yayo) iyo inogona kuuraya huwandu hwamavirusi, mabhakitiriya, fungus uye protozoa, kupa chimiro ichi kukosha kunokosha kwe kurapa maronda uye kubata zvirwere zvinotapukira. Tsvakurudzo yakaratidzawo kubudirira kweEchinacea mukurapa kupisa, bronchitis, chifukidzo, zvirwere, nezvimwewo.
Echinacea inewo Echinacea, chinhu chinonzi biochemical chinodzivirira pakurwisa kwezvirwere kuburikidza neutralizing the enzyme-dissolving enzyme, hyaluronidase, yakagadzirwa nemishonga yakawanda. Uyewo, zvidzidzo zvakafanana nezvo zvakabudiswa muAIDS uye Immunology zvinoratidza kuti Echinacea ine zvinhu zvinowedzera macrophage simba remuviri kuparadza majeremusi. Uye zvimwe zvidzidzo paYunivhesiti yeMunich zvakaratidza kuti Echinacea zvinyorwa zvinowedzera T-cell production zvichienderana ne30% kupfuura zvinodhaka zvinoshandiswa mumuviri wezvirwere.
Pau d'Arco (Tabebuia heptophylla) inobva kumahombekombe eBrazil nedzimwe nzvimbo dzeSouth America. Iyi miriwo inoshamisa inobatsira muviri kudzivirirwa kwemuviri uye inobatsira kudzivirira kubva kuhutachiona hwezvisikwa. Yakashandiswa kwemazana emakore kunatsiridza zvirwere zvekudzivirira muviri, kudzivisa, uye kuderedza marwadzo mumuviri, kunyanya kune majoini. Kutsvakurudza kwakaratidza kuti ine mishonga inorwisa mabhakitiriya, iyo inoporesa muviri wose, inochenesa ropa uye inouraya mavairasi.
The Pau d'arch inoshandiswa kurapa AIDS, nezvimwe zvinhu, chirwere chipi uye kuzvimba, kupererwa neropa, asima, arthritis, arteriosclerosis, kusimbisa ropa, pamusoro bronchitis, nemhando dzose kenza, Candida, colitis, cystitis, emphysema, chirwere cheshuga, eczema, fistulas, gastritis, mwandabvu, hemorrhages, hernias, Hodgkin nechirwere, chiropa chirwere, neleukemia, lupus, multiple sclerosis, osteomyelitis, Parkinson, chirwere polyps, prostatitis, psoriasis, rheumatism, kenza ganda, nzara, chirwatata zvirwere, nenyoka, maronda, varicose mutsinga, nemburwa uye vakwegura namavanga.
Vanhu vomunharaunda yeAmazon vave vachishandisa Suma kwekuda kwemakore ekupedzisira e300. Zvisinei, raisati rasvika kusvika 1975 kuti Suma yakatangwa munguva ye20th century uye yakaedzwa kuYunivhesiti yeSao Paulo, Brazil.
Dzidzo dzakagadzirwa naDkt. Milton Brazzach dzakagumisa kuti pasina mushonga, inobatsira zvikuru kugadzirisa chirwere cheshuga, chirwere cheshuga neavo vanotambura nacho, pasina michero isina kunaka. Kubvira ipapo, zvidzidzo zvakaitwa pa [American College of Healing Arts] "American College of Healing Arts" naDkt. Michael Tierra, munyori webhuku rinonzi The Way of Herbs, anoratidza kuti kushandiswa Kugara kwaSuma kunogona kubatsira kurwisana (kunosanganisira kurapwa kwekusagadzikana kusingaperi uye kusava nesimba), kudzivirira kutonhorera uye futi, kukurumidza kuporesa, kudzora hypoglycemia, uye kukurudzira kuita zvepabonde.
Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zveSuma ndezvi:
• Pfaffic acid, iyo inodzivisa kupararira kwezvinetso zvakasiyana-siyana zvemasero.
• Pfaffocides nemamwe saponins, ayo anobatsira kumisa zvirwere.
• Sitosterol yemusima uye stigmasterol hormones, iyo inodzivisa kuvhara kwecholesterol nekuvandudza kupararira kweropa.
• Alantoin, iyo inobatsira kukurumidza kuporesa.
• Uye chakakosha kupfuura zvose: germanium. Suma ine imwe yepamusoro-soro yeGe-132 yemiti yose inozivikanwa.
Chii chinoshamisa pamusoro peGe-132? Yakave yakanyatsozivikanwa pamusoro pemakore 20 akapfuura nemukemikari wokuJapan, muongorori anonzi Kazuhiko Asai. Zita rakakwana raCarboxyethylgermanium Sesquioxide (kana Germanium Sesquioxide, iyo inopera).
Maererano naDr. Parris Dr. Kidd akatsvakurudza achiti: "Izvozvi, zvisingabvi nemigumisiro mikuru, zvinogona kunge zvakanzwika, zvinogadzirisa, zvinodzorera kubereka, zvinodzivirira kusapererwa pamuviri panguva yekuzvitakura, kuporesa kupisa pasina zvinopisa, kuisa kuguma kwehutano hwehutachiona, kudzorera kuona uye kunzwa, kugadzirisa marwadzo emakwenzi makuru, uye kuderedza kenza mumavhiki mashoma. Kweropa zvinetso, kusanganisira mwoyo kurwiswa, angina, mwoyo kurwiswa uye peripheral kukuvara ikarumbidzwa zvakanaka Ge-132, kufanana kuzvimba chiropa uye cirrhosis, uye zvimwe zvirwere yokuzvibata.
Mishonga yakawanda inowanika muReishi mushroom, Maitake neCordyceps inorondedzerwa seHoten Defence Potentiators (HDP). Kusanganiswa kwezvinokonzera izvi zvinotendwa kusimbisa hutachiona hwevanhu, uyewo rubatsiro nehutachiona hwehutachiona, metabolism, hormonal balance, uye kutakura kwezvimiti uye oksijeni. Kuburikidza nemukuru wemasikirini emasikirini (T cells), anobatsira muviri kurongedza kukura kwemasero emazuva ano uye mamwe maitiro anokosha ekudzivirirwa kwemaviri edziviriro.
Reishi: Mishonga inorwisa-carcinogenic uye immune yeReishi mushroom inonyanya kunzi inonzi polysaccharides. Reishi mushroom ane yakakwirira ye mucopolysaccharides, iyo muviri inosanganisa mumasero membrane ichiita kuti isapindirana nemavirusi uye pathogenic mabhakitiriya. Zvinoratidzika kuti polysaccharides inobatsira macrophage, masero machena eropa ayo "anodya" mavairasi, mabhakitiriya uye mamwe mashoma.
Maitake: Howa izvi zvine refu Kuwanda remubatanidzwa yakasiyana polysaccharide inonzi Beta glucan 1,6, iyo vanotsvakurudza zvino kutenda kuti mumwe simba kupfuura adaptogenic uye zvirwere rinodhaka rizivikanwe. A yokudzidza tsvakurudzo yakabudiswa Chemical Pharmaceutical Bulletin (1988) akaratidza kuti Maitake ane inhibitive ukoshi 64% kuti kenza yemazamu uye kupararira namamota uye inhibitive ukoshi 75% kuti kenza ganda uye kupararira kwemaronda. Zvidzidzo zverabhurasi muUnited States National Cancer Institute uye Japanese National Institute of Health zvakaratidzawo kuti Maitake inotora inouraya hutachiwana hwehutachiwana hweHIV uye inowedzera T anobatsira masero ekasa. Kutsvakurudza kwakaratidza kuti Maitake inokurudzira zvakasiyana-siyana zvemasero ezvirwere zvemumunwe zvinosanganisira macrophages, maseru ekuuraya, T cells, Tc naTdh.
Uye kwete chete iyo inokurudzira kugadzirwa kwemasero aya ezvirwere, asi inowedzera kubudirira kwavo nekusimudzira kugadzirwa kwe inteleukin-1, inteleukin-2, uye lymphokines. Sezvatatotaura kare, aya ndiwo makemikari ayo muviri unowanzogadzirwa kuti uite maitiro ekuzvidzivirira mumuviri wemuviri uye kubatsira kune dzimwe nyika zvinhu. Icho chinopupurirwa kuti Maitake ane zvimwe zvinobatsira zvakakosha kurwisana nekenza nemakumbo, ichiti:
Iyo inodzivirira masero ane utano nekudzivirira kuti vasanyanya kuva nekenza.
Inobatsira kudzivirira kupararira kwekenza (metastases).
Inononoka kana kudzivisa kukura kwemakumbo.
Inoshanda pamwe chete nekemotherapy kuburikidza nekuderedza kuipa kwemigumisiro yakaipa. Chimwe chidzidzo chinorondedzera kuderera kwe90% yemigumisiro ye chemo kusanganisira kusuruvara kwemvere, kurwadziwa, uye kusuruvara.
The Cordyceps ine zvinhu zvakafanana kune zveginseng uye inoshandiswa kusimbisa uye kuvakazve muviri mushure mekuneta kana kuti kurwara kwenguva refu. Inoshandiswawo zvekare zvekushaya simba, neurasthenia, uye zvinetso zvepvo. Ongororo ichangobva kuitwa neCordyceps Extracts yakagadzira puroteni yakanyanya polysaccharide-inopikisana nemakumbo panguva iyo ichipa hutachiona hunovandudzwa. Cordyceps ndeimwe yemapurazi anozivikanwa zvikuru ose emishonga yeChina, uyewo chimwe chezvinhu zvinodhura (zvinodhura kusvika ku $ 249 kilogram).
Cordyceps inowanzoshandiswa kurapa zvinetso zvechirwere, kusava nesimba, kupera simba kwezvirwere, uye nekutsungirira kwevatambi.
Garlic ndiyo imwe yemishonga yakanakisisa inowanikwa kune mabhakitiriya uye hutachiona hwehutachiona. Chimwe chezvinhu zvayo zvizhinji, allicin, inorwisa mabhakitiriya chaiwo asingaoneki kuti anokonzera kusagadzikana kwebhakitiriya matambudziko. Mukuwedzera, tsvina yakagadzirwa yakagadzirwa yakave yakaipa kune mavirusi mazhinji.
Garlic inokwanisawo kukurudzira basa re macrophages rinogamuchira zvisikwa zvekunze, zvakadai semavirusi, mabhakitiriya, uye mbiriso. Mukuwedzera, garlic inowedzera basa remasero anobatsira T. Uye gorosi inogona kunyanya kubudirira pakurapa maronchitis inokonzerwa nemavirusi, nekuda kwekusimudzira zvinhu zvekuchengetedzwa kwezvirwere uye kukwanisa kwayo kubvisa mapurisa kubva kumapapu. Uye pakupedzisira, garlic inobatsirawo kurwisa streptococcus uye staphylococcus bacteria.
(Chimwe nechimwe pamusoro pegilisi chinoshanda zvakare kune anyanisi.) Anyanisi uye garlic zvinosanganisira maitiro akawanda emasulfuric ayo anoshanda chaizvo seantiviral uye antibacterial agents.)
Simba re polysaccharide reAloe vera, acemannan, rine basa rinokosha rekuvhara ropa uye rinowedzera hutachiona. Zvinosuruvarisa, chiyero cheacemannan chinosiyana zvikuru kubva kune mumwe mugadziri kuenda kune imwe. Mishonga ine high level yemabasa acemannan yakawanika kuwedzera chiito che lymphocytes pane alloantigens nekuvandudza kusunungurwa kwe monocytes kubva inteleukin-1. Mukuwedzera, zvakave zvicherechedza kuti acemannan inowedzera macrophage mazinga uye ine simba rakanaka pane CD-4, CD-8, T-4 uye T-8 mazinga.
Alkyglycerols (inozivikanwawo sealkolxyglycerols, kana AKGs) inowanzoberekwa nemuviri uye inowanikwa mumukaka wechipfuva, chiropa, spleen uye marrow bone. Vanoita basa guru mukugadzirwa nekusimudzirwa kwemasero machena eropa. Vanobatsirawo kusimbisa basa remafupa emapfupa. AKG's immune boosting effect inobatsira muviri kuti uzvidzivirire pakurwisa mabhakitiriya, fungal uye viral infections. Chinyorwa chakasimba zvikuru che AKG munyika yose is shark chiver oil.
Lactoferin imwe yemaktokines akabudiswa nemuviri. Inowanikwa munzvimbo dzinowanzoshungurudzwa kurwisa, dzakadai mumatumbu, maziso, nzeve, huro, urinary canal, nezvimwewo. Lactoferrin yakaratidza kuti iyo:
• inodzivisa kuwedzera kwevairusiki, kusanganisira AIDS nemavhivirusi emukadzi, mumasero ane utano;
• inhibisa kuora kwekukura uye metastasis;
• inonyanya kuipa kune mabhakitiriya nemasese, nokudaro kuva nehuwandu husinganzwisisiki mukudzivirira kukwira kwebhakitiriya uye kukwidzwa mumatumbo;
• inobatsira neutrophils.
A supplement ya lactoferrin (kana kuti kukurudzira kugadzirwa kwayo mumuviri neine probiotic) inogona kukurudzira zvirwere zvemuviri uye / kana kubatsira muviri kuti uwane kubva kune utachiona. Kune rumwe rutivi, kuchengetedza maruva emukuchi muhutano hwakanaka kunobvumira mutumbi kubereka rawo lactoferrin.
Glutathione inyanzvi yemasikirini yemaminosi inonzi tripeptide inowanikwa mumasero emuviri. Mukuwedzera pakuva anonyanyisa antioxidant, glutathione inotsigira kushanda kwemuviri wezvirwere zvezvirwere uye ichi ndicho chinhu chinonyanya kukosha chese lymphocytes. Zvechokwadi, yese lymphocytes inoda zvakakwana maitiro epracellular glutathione kuti iite zvakanaka. Iyi molecule inobatsirawo kudzivirira zvinokonzera kukanganisa kwehuwandu hwose hwezvirwere uye marinogen. Mune vanhu vakawanda, glutathione inowedzera kuvhiringidza dumbu ravo. Pakati pezvimwe zvinoshandiswa ndezvipamberi zve glutathione cystine uye glutamyl cystine uye kunyanya whey michina.
Beta 1-3 / -16 Glucan inowanzoitika yemakungu-ehydratro inowanika inowanzo mu mbiriso masero masvingo. Inoshanda ne "kushandura" ma cell macrophages.
Vanhu vakawanda vanofunga kuti maitiro ezvirwere zvezvirwere zvezvirwere ndezvechimwe chinhu chiri kuitika ari oga. Iko kukanganisa kukuru. Ngatimbokurumidze kudzokorora Hurongwa hweHurongwa hweBhutano hwehutano hwehuwandu hwehuwandu hwehutano hwemamiriro ese ehu hunoita sangano rose.
• Muviri wako wezvirwere zvezvirwere (kunyange kana iwe uchitora zvose zvinowedzera munyika iwe unoda) kana chikwata chako chakazara nezvikanda zve 20 zvekare? Chimwe chikamu chikuru chemuviri wako wechirwere chekudzivirira muviri unofanira kubva uchirwisana nemigumisiro yekuita-kudhakwa. Chenesa matumbo ako uye udzivirire muviri wako wekuzvidzivirira.
• Bhakitiriya inobatsira (kana iripo) inobereka mafungiro ezvinyorwa zvakadai seMutation Factor uye Lactoferin zvakananga mumatumbo. Mune mamwe mazwi, tora maitiro akanaka ekurwisa maitiro uye iwe uchaita kuti muviri wako uwedzere kuwedzera zviratidzo zvekudzivirira muviri.
• Kutora enzyme yekudya inowedzera zvikuru kunoderedza kuitika kweCIC, iyo panguva imwechete inoderedza kushungurudzika kwekuwedzera komune system.
• Zvokudya zvinokodzera zvekudya zvinowedzera maitiro ezvirwere zvemuviri. Mune maune immune semuviri unoitwa kubva kune zvatinodya. Kurasikirwa kwekudya kunovaka muviri kunoreva masero emunodzivirira asina kukwana. Kuwedzerwa kwakakwana kwevhitamini nemaminerari kunowedzera kubudiswa kwemasero emumune mumuviri.
• Omega-9 + Fatty Acid ndiyo modulator yemuviri wechirwere chemuviri inobatsira kuchengetedza zvirwere zvemuviri zvirongwa zvakanaka kuitira kuti zvirege kuzvirwisa.
• A chakarondedzera izere uhwu antioxidants boosts dziviriro yezvirwere mumuviri munzira dzakawanda. Kungofanana muenzaniso, tora curcumin. In Immunological Investigations [Immunological Investigations], 1999, Vol. 28, 5-6 Publications, p. 291-303 dzinobudiswa zvidzidzo zvinoratidza kuti curcumin anogona kuderedza uwandu ropa masero machena kuna 50 12% chete mazuva, tisingatauri achiparadzira antibodies 512 mune imwe nzvimbo kwenguva.
• Kuchenesa chiropa nechinangwa chekugadzirira uye hurongwa hwekuvakazve hunovandudza kukwanisa kweropa kuchibudisa zvirwere zvekuzvidzivirira uye kubvisa mabhakitiriya kubva muropa. Kuchenesa ropa neropa rekuchenesa ropa uye kuenzanisa ropa pH kunobatsirawo kugadzirisa zvirwere zvekuzvidzivirira.
• Zvechokwadi, kushandiswa kwemishonga zuva nezuva kwataitaura nezvayo muchitsauko ichi kwakaratidzwa kunatsiridza zvirwere zvemuviri pasi, kunyange mumakemikirini ane utsinye.
Immune multipliers: Echinacea, Pau d'arco, Suma, Reishi, Maitake, Cordyceps
Pathogen vaparadzi: garlic, anyanisi, ginger, habenero juice, horseradish (black radish), apple cider vhiniga
• Kuita kwepfungwa uye kutarisa sezvinotsanangurwa muchitsauko chinotevera kunogona kukurudzira zvirwere zvekudzivirira zvirwere zvishoma nezvishoma semaawa 24. Mukuwedzera, kushandiswa kwemishonga yemiti inokonzera mitsipa kunogona kuderedza kudengenyeka mumuviri, zvichiita kuti kuwedzerwa kwezvirwere zvemuviri, zvinenge zvichiitika usiku chete.
• Uye ramba uchiyeuka kuti chinonyanya kukosha pane zvipembenene zvakawanda ndezvemaziso, mhino nemuromo nemubatana. Ramba uchifunga kuti maoko angave angangotyisidzira nekuda kwekubatana nevamwe vanhu (ruoko rwekugadzira maoko, somuenzaniso) uye kubatana nezvinhu zvakadai sevashandi vemagetsi nefoni. Kushambidza maoko ako nguva dzose mukati mezuva (kunyange nesipo nguva dzose) kunogona kushandiswa kuchengetedza maitiro ezvirwere zvemuviri.
• Uye pakupedzisira, chimwe chezvibatsiro zvikuru zvekudzidzira nguva dzose ndiyo yakagadzirirwa zvirwere zvemuviri.
Fermented Black Garlic - 250mg - 200 makapu - Allium sativum L.
2 nyowani kubva ku € 16,90
Tenga € 16,90
Yakadzora Gluthation Capsule - Antioxidant 500 mg - Jarrow Mafomula Brand
2 nyowani kubva ku € 60,40
Tenga € 60,40
GLUTATHION yakadzikiswa ikaita 98% - Fomula ine vapamberi + Vitamin C - Inosimbisa Immunity, ...
2 nyowani kubva ku € 26,90
Tenga € 26,90
GLUTATHION muBIO-Natural kuvirisa + CHARDON MARIE & NAC neBIO Acerola | Immunity + Detox ...
Tenga € 27,90
L-glutathione 500mg - yakaderedzwa - vegan - 120 mahwendefa eL-glutathione
Tenga € 40,95
Pur Aloé - Organic Aloe vera Kunwa kwakachena gel 1000ml
7 nyowani kubva ku € 16,90
Yakapedzisira kugadziridzwa munaGunyana 21, 2021 2:50 am
Nzira yekudzikisa nayo muviri wako
Maradona, un kid en kana - Zvinyorwa (2006)
Chinokosha kududziro yezviroto maererano neEgypt bhuku rezviroto